Kenya oo maxkamadaynaysa shaqsiyaad loo haysto weraarkii Jaamacada Gaarisa – Radio Daljir
Kenya oo maxkamadaynaysa shaqsiyaad loo haysto weraarkii Jaamacada Gaarisa
Janaayo 4, 2018 1:25 g 0
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in Maxkamadeynta 5 qof oo loo heysto weerarkii Jaamacadda Gaarisa ay billaabaneyso 21ka Bishan January.
Weerarkaas waxaa ku geeriyooday 147 Qof oo u badnaa Ardeyda Jaamacadda,waxaana dadka loo heysto ay gaarayaan Shan Qof oo midi Tanzania u dhashay.
Ragga weerarkaas loo heysto waxaa ay kala yihiin,Rashiid Chales oo Tanzaniyaan ah, Maxamed Cabdi Kaar, Xasan Aadan Xasan, Sahal Diiriye iyo Cismaan Cabdi.
Frank Anunda oo ah dacwad oogaha ayaa shaacisay Sawirrada 159 Qof oo dhibbanayaal u ahaa weerarkaas,waxaana ay sheegtay in qaar ka mid ah Raggan ay yihiin Ardey Kenyaan ah oo sharciga ka bartay Jaamacadda Nairobi,sidoo kalena garyaqaanno ka ahaa Mandheera.
Waxaa kale oo uu Maxkamadda tusiyay sawirrada 13 qof oo ka mid ahaa Al-shabaab islamarkaana weerarkaas fuliyay kuwaas oo ka baxsaday goobta halka Ragga kale oo afar ahaa la dilay sawirradoodana lagu soo bandhigay Maxkamadda.
Dallada PUNSA oo Garowe kusoo bandhigay shir ku saabsan Calaamadinta Xuduudaha Gobaladda Puntland (dhegayso)